Baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo meelmariyay dib u eegista miisaaniyada 2019 - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBaarlamaanka federaalka Soomaaliya oo meelmariyay dib u eegista miisaaniyada 2019
December 2, 2019 Abdi Omar Bile Somalia 0
Baarlamaanka federaalka Soomaaliya. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah meelmariyay dib u eegis lagu sameeyay miisaaniyada 2019, sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka.
118 ayaa aqbashay, 15 ayaa diiday, sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan.
Miisaaniyada 2019 ayaa dib u eegis ay ansixiyeen golaha wasiirada lagu sameeyay bishii September kadib markii koror ku yimid ku talogalka hore oo ahaa $344 milyan balse markii dambe noqday $390 milyan, sida uu sheegay wasiirka maaliyada Cabdiraxmaan Bayle Ducaale.
Xilligan, baarlamaanka ayaa gacanta ku haya miisaaniyada 2020 taasoo lagu qiyaasay $460 milyan, waxayna muujinaysaa siyaado dhan 18% marka la barbardhigo sanadkii 2019.
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka Puntland ayaa adkeeyay ammaanka dalka oo dhan inta lagu guda jiiro Ciidul Fitr. Ciidamo badan oo hubaysan ayaa la geeyay gudaha magaalooyinka waa-weyn ee Puntland si ay uga hortagaan wax walba [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sargaal katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa maanta oo Jimce ah isku dhiibay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo, sida ay sheegtay wakaalada wararka dowladda Soomaaliya ee SONNA, oo soo xiganaysa sargaal [...]